Meeshaan Abbaa Hojetateef Dhimma Baasa « QEERROO
February 19, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	Leave a comment
Ijaarsi OPDO qabeenya Uummata Oromoo miti. TPLF ijaarsa OPDO akka dhoqqee xaxxaftee akka dhimmi baasuuf kan ijaarate dha. TPLF uummata Oromoo dura meeshaa ishee kan tahe OPDO dhaabdee uummata keenya burjaajessuu fi gowwoomsuuf waan hin goone hin qabdu. Qondaalonni OPDO wal duraa boodaan “nuyi ijaarsa Oromoo ti, Uummata Oromoo ijaarre akka mirga isaa gonfatu goona”jechaa , ilmaan Oromo ajjeessaa fi ajjeesisa, qabeenya Oromoo saamaa fi saamsisaa waggaa dhigdamii shanii ol itti wal furaa jiru. Yaroo uummatni Oromoo isaan xuxxee tufu TPLF warra uummatni jibbe akka qodaa cabe achi darbitee isa afaan mi’ahu tokko fuula isaa dhadhaa dibdee as uummatatti baafti. Meeshaan TPLF iif dimma hin baafne jiraachuuf ayyaana tokko illee hin qabu. Qabeenya dhuunfaa ishee waan tahee akka barbaade itti xaphachaa jirti.
Fincila Xummura garbummaa Qeerroo fi Qarreen Oromoo dhigaa isaanii itti lolaasanii fi lolaasa jiran ukkamsuu namchi Obbo Muktaar Kadir Jedhamu tasa darbtee nama Obbo Lammaa Magarsaa jedhu preidantii OPDO muddatee jirti. Hojiin TPLF kun homaa nu dinquu hin qabu. Akkauma ammala ishee kunis yoo lubbuu ishee kan dheeressuuf tahe yaalaa jirti. Karaa koo akka nama Oromo hubannaa fi muxxannoo qabsoo uummata Oromoo keessaa qabutti OPDO irraa waan haaraa eegachuun burjaaja’uu dha. Anaaf akkuma TPLF irraa waan haaraa eegachuu irraa gargarumaa hin qabu.
Garuu Obbo Lammaa Magarsaa yaroo waa’ee uummata Oromoo dubbatu dhaga’ee, deddeebisee yaaduun jalqabe. Afaan dhadhaa godhee yaroo waa’ee rakkina Uummata Oromoo dubbatu warra qabsoo Oromoo itti jirru irraa adda hin fakkaatu. Gootni tasuma lafaa ka’ee namni kaan hojjechuu kan hin dandeenye hojjetee ggotumaa isaa ragaasifata.Yoo namni kun akkuma keenya garaan isaa gubachaa jira tahe maal beekna? Akka Lelisaa Fayisaa yoo Gootata Oromoo tahee argame maal jenna? Yoo carraa argatee innuu Goota Oromoo tahuu fi gatata tahuu isaa of saaxila baasa. “Uummanni Oromoo ijaaramuu fi tokko tahuu qaba” yaroo jedhu dhageeynee jirra.
Obbo Lammaa Magarsaa yoo dhugaaf dhabata ykn Oromoo Jaallata tahee : kunoo boorreen isaa
Misseensota OFC: Dr. Mararaa Gudinaa, Obbo Bekala Garbaaf warri isaan wajjin umuriin kanaan mana hidhaa keessatti badii tokko malee gidiraa argaa jiran akka gadi lakkisaman gochuu .
Qeerroo fi Qarree Ormoo harka mataa irratti ol kaasani karaa nagaa haqa isaanii gaafatn hattattmaan mana hidhaa keessaa akka bahan gochuu.; gummaa warra ajjeessamanii gaafachuuf akka humna hin qabne nuuf gala.
Command posti in Uummata Oromo irratti diriifamee jiru hattattmaan akka buqqa’u.
Waraana Liyuu poolis jedhamu TPLF leenjiftee, hidhachiiftee uummata Oromoo irratti bobbafteeee saamaa fi ajjeessa jirtu irraa ittisuu. Humni kun silaa gita isaa ykn kan isaa gadiiti. Uummata Oromoo irraa ittisuuf TPLF irraa eehama eegachuu illee hin qabu.
Obbo Lammaa Magarsaa afaaniin waan uummata Oromoof dhaabbatee haa fakkeessu malee, yaroo gabaabaa kana keessatti, Waraanni Agaazii ija isaa duratti ilmaan Oromoo akka bineessaa adamsee, tumaa, hidhaa, waxxalaa fi ajjeessaa jira. Qarree Oromoo diinni garreen gudeede itti xaphatuu dhaabbatee gama ilaala. Qabeenya Ormoo diinni yaroo saamu dhaabbatee feesisa. Aaangoo presidantuumaa Oromoo qabaachaa uummata ija isa duratti lafa isaa irraa duguugamee dhumaa jiruu namni hin dirmanneef Oromoon haa ijaaramu yaroo jedhu maal jechuu isaa ti?
Warri karaa nagaan qabsoofnee haqa keenya falmanna jedhuu hunduu mana hidhaa jira. Ijaarsa isa akkamii barbaada haa jennu? Namni hunduu OPDO tahaa jechaa isaa ti? ABO taha ijaaramaa jechuuf akka hin taane nama mamsiisa. Warri karaa nagaa qabsoo godhan jireenyi isaanii mana hidhaa yoo tahe war of irratti loluu barbaadu immoo ayyanni isaanii maal taha? Aka hojiin isaa amma yoona agarsiisaa jiru yoo tahe namni kun uummata Oromoo afaanfajjeessuuf hojii TPLF raawwachaa jira malee uummata Oromoo fi Qabsoo Bilisummaa Uummata Oromoof dantaa tokko hin qabu.
Uummatni Oromoo Kabaa amma Kibaa, Bahaa amma dhihaa akka nama tokkotti ka’e yaroo TPLFiin kokkee qabee, akka Labsii Hatattamaa bahu yaroo dirqu Obbo Lammaan isa jira? Yoo waa’ee tokkummaa ijaarsota siyaasaa kan oddeessu tahe uttu ijaarsonni har’a jira jedhan hunduu tokko tahanii bulanii boru immoo haaraan amma sana dhalatee buluu danda’a. Ijaarsota siyaasaa tokkoo goona yaadni jedhu abajuu dha. Warri kaayyoon wal fakkaatu wal barbaadee waliin dhaabbatu malee akka baaqelaa fi boqqoloo walitti qabanii xuwwee tokko keessatti kan afeelan miti.
“Gamni orma irraa barata , gowwaan immoo of irraa iyyuu in baratuu “, jedhan. Yoo of gowwoomsuu barbaadne malee TPLF ifa baafte,” nuyi biyya kana qawween fudhane, isinis yoo dandeessan qawween fudhaa”jettee jirti. Filmaata biraa hin qabnu. TPLF wajjin kan gargar nu baasu qawwee qofaa dha.
Har’a warri Qeerroo BIlisumma Oromoo fi WBO hin gargaarree fi hin tumsinee bilisummaa Oromoof dhaabbanna ykn jaalanna jedhan qaanii dha. Hojiin akkuma Obboo Lammaa TPLF jajjabeessaa waa’ee Uummata Oromoo sobanii gadoodaa ooluun seenaa duwwaa utuu hin taane yaroon itti uummatni Oromoo nuu gaafatuu fagoo hin jiru.
Gadaan Gadaa Bilisumaati!
« “Maaltu Yaada Deebii” Wallee Warraaqsaa Hawwisoo Qeerroo
“Nuti Abdii Hin Kunnu” Hawwi Mohammed Fi Abbaabaa Dhugaasaa /Wallee Warraaqsaa »